Kulamo xalay ka qabsoomay Magaaladda Cadaado – Radio Daljir
Juunyo 27, 2019 4:55 b 0
Xalay Magalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud waxaa ku hoyday wufuud kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo shalay Gelinkii dambe gaaray halkaas.
Madaxdaas kala duwan ayaa xalay waxa ay kulan ku yeesheen Magalada Cadaado, iyaga oo ka arrinsanayay sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta ka taagan Galmudug,isla markaana loo qaban lahaa doorasho ay u dhan yihiin dhamaan dadka ku nool deegaanada Galmudug.
Xildhibaanada ka tirsan labada Aqal,Xubnaha Golaha Wasiirada ee ka mid ahaa wafdiga Ra’iisul Wasaaraha iyo kuwa horay ugu sugnaa Cadaado ayaa waxaa ay leeyihiin kulamo gooni gooni ah oo looga hadlayo xaalada Galmudug iyo sidii meel wanaagsan loo geyn lahaa.
Kulamo kale ayaa la filayaa in Maanta oo Khamiis ah ay sidoo kale ka qabsoomaan Magalad Cadaado, iyada oo Bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool Magalada Cadaado ay soo dhaweeyeen howlaha ka socda Magaaladaas.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la filaaya inta uu ku sugan yahay Magalada Cadado in uu la kulmo Odayaasha iyo waxgaradka Magaaladaas si uu kala hadlo xaalada Galmudug gaar ahaan dadka reer Cadaado oo doorweyn ku leh arrimaha Galmudug.